Booliska Somaliland oo gacanta ku soo dhigay lacag Dollar been ah iyo dadkii sameynayay
Hargeysa (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska Somaliland ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa la sheegay inay Gacanta ku dhigeen lacagta loo yaqaan Dollarka Madow ee Been abuurka ah iyo Qamri badan iyo sidoo kale dad lagu soo qabtay.
Howlgalka lagu soo qabtay lacagta been abuurka ah ayaa Ciidamada Somaliland waxaa ay ka fuliyeen Xaafado ka tirsan Hargeysa, Burco iyo Gobolka Sanaag, waxaana la sheegay in sidoo kale dad gacanta lagu soo dhigay.
Afhayeenka ciidanka Booliska Somaliland, Feysal Xiis ayaa sheegay in dadka Dollarka been abuurka ah ay doonayeen in ay dadka dadka bedeshaan lacagta Somaliland laga isticmaalo taas oo bulshada dhibaata ku ah.
Waxaa uu sheegay in falkaasi ay u hayaan Shan rag ah iyo haweeneey, kuwaas oo uu sheegay in dhawaan la horkeeni doono Maxkamadda Magaalada Hargeysa si tallaabo looga qaado.
Waa markii labaad oo sanadkaan gudihiisa ay ciidamada Somaliland ay gacanta ku dhigaan lacago Dollar been abuur ah, kuwaas oo ay Boolisku sheegeen in dad loo maxkamadeeyay dadka kalena loo maxkamadeynayo.
Tags: Boolis, Burco, Dollar been abuur ah, Hargeysa, howlgal, Qamri, Somaliland
Wasiirka Caddaaladda oo ka hadlay dil uu geystay askari Ka tirsan Ilaaladiisa
Madaxweynaha JF Somaliya oo ka tacsiyeeyay geerida madaxweynihii hore ee Puntland